देशका अधिकांश ठाँउमा अझैं ३ दिनसम्म मेघगर्जन, हावाहुरीसहित वर्षा ! « Nepal Bahas
देशका अधिकांश ठाँउमा अझैं ३ दिनसम्म मेघगर्जन, हावाहुरीसहित वर्षा !
प्रकाशित मिति : ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १०:३८
काठमाडौं । गत शनिबारदेखि देशभर मौसममा गडबडि देखिएको छ । अझैं ३ दिन देशका अधिकांश ठाँउमा मेघगर्जन, हावाहुरीसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ ।
पश्चिम न्यून चापीय प्रणालीको प्रभावले मुलुकभरको मौसममा बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना देखिएको हो ।
मंगलबार आज दिउँसो देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केहि स्थानहरुमा मेघगर्जन, हावाहुरीसहित वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । उच्च हिमाली भूभागहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको संभावना छ ।
त्यस्तै भोली ‘बुधबार’ दिउँसोस् देशभरि आंशिकदेखि सामान्य बदलि रहनेछ भने पश्चिमका थोरै स्थानहरुमा र मध्य र पूर्वका केहि स्थानहरुमा मेघगर्जनसहित वर्षाको सम्भावना रहेको छ। उच्च हिमाली भूभागहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपातको संभावनासमेत रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
बुधबार रातिको पनि देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रहने बताइएको छ । राति देशका पहाडी भू-भागमा मेघगर्जनसहित वर्षा एवं उच्च हिमाली भूभागहरुमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने माहाशाखाले जनाएको छ ।
विहीबार देशभरि नै आंशिकदेखि सामान्य बदली रही पश्चिम र मध्य पहाडीका थोरै स्थानहरुमा र पूर्वका केहि स्थानहरुमा मेघगर्जनसहित वर्षा हुने र राति पनि मौसम त्यस्तै किसिमको रहने छ ।
मौसमी प्रणालीको प्रभाव विस्तारै पूर्वतिर सर्नेक्रममा रहेको छ। पश्चिमतिरको आकाश सफा भए पनि पुनः अर्को मौसमी प्रणाली आउने देखिएकाले अझै केही दिन मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली भइरहने महाशाखाले जनाएको छ ।